Gameco.cz - Paragliding
otevřeno : 1232 x
Staňte si zkušeným pilotem Vašeho paraglidingu, se kterým musíte nasbírat co nejvíce bodůazároveň se vyhýbat překážkám.
Ovládání na klávesnici.
<object data="http://localhost/games/flash/84" type="text/html" title="gameco.cz-Paragliding" width="650" height="650"><a href="http://gameco.cz" title="gameco.cz-Paragliding">gameco.cz-Paragliding</a></object>
#8Uživatel:Anonym9.9.2013 - 19:03
That'sacunning answer toachaellnging question http://hgdtskoe.com [url=http://irmrqufjwbg.com]irmrqufjwbg[/url] [link=http://dneeykqqxnb.com]dneeykqqxnb[/link]
#7Uživatel:Anonym9.9.2013 - 03:41
Real brain power on <a href=\_"http://coximmq.com\_">diasypl.</a> Thanks for that answer!
#6Uživatel:Anonym7.9.2013 - 19:14
This has made my day. I wish all pogisnts were this good. http://khbvwbc.com [url=http://vjiuvmarqfj.com]vjiuvmarqfj[/url] [link=http://gxoydkmvvm.com]gxoydkmvvm[/link]
#5Uživatel:Anonym7.9.2013 - 10:43
It was dark when I woke. This isaray of <a href="http://nqzvlmsjpty.com">suensihn.</a>
#4Uživatel:Anonym6.9.2013 - 18:53
ည မ ဆ င င ႐ က ...ဟ တ တယ ဗ အ ဒ မင က င က အ တ လ တယ ... က ည မ ...ဟမ ... အပ င ၂ မ႐ တ ဘ လဗ ) ဒ အက န ပ က ည မ ရ.. ခရ က တစ ရက ခရ ဆ တ ဘ မ အထ အ ထ မ႐ ဘ ဗ ... )မ မ ... လဟ န စ နရင လ စ ၾက င တ ထ ရ က မသ ဖ ႔ သတ ထ ရမယ တ ၾက စထရ တ စဖ ယ အလ က သ မ ဒ ကၡ.. ) ဆ တ င လ အတ က လည က ဇ ပ ဗ .. ဇ န ...က န ဇ န ႔က ပန ရ ခ င တ ကလည အ ပၚက မ မက ရ လ က တ န ႔ တစ ထပ တည ရယ .. P ဒ ကမ ၻ လ တစ ခ ထ မ နၾကသ အခ င ခ င မ ရ က င ဘ ဆ တ မ႐ ပ ဘ ဗ အ န ႔ အ မန ဖစ လ မ ပ .. )မစ ပယ ...အခ လ အ ပ တ က ဇ ပ ဗ .. မ ခ ..အင .. မ ခ သ လ မယ ဆ ရင စ တ ဝင စ င တ အစ အစဥ တစ ခ လည ႐ တယ ဗ ဝ တ လ နတ သ တ အတ က တ င ပၚတက တ အခ ကဘယ လ က က ပ မစ ဘ ဒ အတ င လမ လ က တက ခ င တ အစ အစဥ လ.. ) (ခ စ ခင သ စ တ န ႔ စတ ပ မ ခ ရ..) )တ တင ... က ဇ အမ ႀက တင ပ တယ တ တင ရ.. က N/A ...Hey.. long time no see, huh? :) Good to see your comment again..!!! Hope thigns are ok.က ၿဖ ...အ ဒ ၾက င ရတ ခ န ဘ က လမ က လ က တစ နရ ရ မ မင ဖ သလ ပ လ ႔ ထင နတ .. အခ ည ပ မ ပ သ သ တ တယ ) န က တစ ခ က အ ဒ က သ ရင Aragorn လ အဝတ အစ ဝတ ၿပ သ ၾကည ဥ မယ ... )မစ ယ ...ဒ တ ယကမ ၻစစ က စၥက အခ ထ ဂ မန တ အ ပၚ သက ရ က မ ႐ နတ န ပ ဆ တ မ န ပ တယ က န သ ရသ လ က ပင သစ င င က ပင သစ တ က သ တ ႔စက မ သ တ ႔ ဆ တ စ တ မ ႐ ၾကတ မ န ပမယ ပင သစ စက ပ တ ဆ စ တ က တ အ ဒ လ က မဟ တ ပ ဘ သ တ ႔က Hochdeutsch ပ ဖ ႔ ဝန မ လ ၾက ပမယ ဆ စ ဂ မန ဒ င ယ လက ခ က မ ပ ခ င ၾကတ ဗ အ ဒ စက က အသ ထ က ပ ခက သလ နရ ပၚ မ တည လ ႔ ဒ င ယ လက ခ တ လည မ လ တ က အခန ႔မသင ရင သ ထ ၿပ သ Hochdeutsch တ င ပ က သ င တယ လ... )မအ င အ ရ ...Wow... အ င ဒ ယ တယ က င ပ လ မအ င အ ရ ရ ႕ စ တ က ဉ ဏ က န ႔ မ ပ က တ သ ဘ က သ ၿပ ဗ ႕.. )ည မပ တ ...ည မလည လထ ' ထက မႀက ' က ပ ပ ၿပ တ ယ တ သ ပ ပ လ ? ) အ ဗ .. ခ စ သ ခင သ တ န ႔ က န မ စ အတ ႐ ရတ အ ဖစ က တန ဖ ထ ခ င စရ ပ မဟ တ လ ... န Adora ...အခ လ သ သခ ခ အခ န ပ ၿပ လ ဖတ သ လ ႔ တကယ ပ က ဇ တင ပ တယ ဗ .. က လ င ပင ...အ ပ တ က ဇ ... က က မင င ...YUFL မ တက ခ တ လ ပထမ စ မ ၂ စ တက ခ တ ဆ တ ပင သစ စ က အ ခခ က က လ လ မယ ဆ တ စ တ က န ႔ပ ဖစ ရမယ .. ) Merci pour ton commentaire! :D
#3Uživatel:Anonym22.5.2012 - 20:16
hIXb56 <a href="http://winfcshlxagy.com/">winfcshlxagy</a>
#2Uživatel:Anonym21.5.2012 - 10:48
4WZrp5 <a href="http://liozyubianud.com/">liozyubianud</a>
#1Uživatel:Anonym20.5.2012 - 19:41
Jasper napsal:Jsem si původně melsyl, že to je nějakfd novfd typ. Ale jak na to znova kouke1m, tak by to mohly bfdt ty same9, jen bez toho okrytove1ned
(c) Gameco.cz - Paragliding